Amathikithi weshibhile weTrenitalia weshibhile namanani entengo wokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi weshibhile weTrenitalia weshibhile namanani entengo wokuhamba
Ikhaya > Amathikithi weshibhile weTrenitalia weshibhile namanani entengo wokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi wesitimela ashibhile eTrenitalia futhi Amanani wokuhamba eTrenitalia kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-Trenitalia ngezigqoko eziphakeme zesitimela
2. Mayelana neTrenitalia 3. Amaphuzu aphezulu Ukuthola Ithikithi Elishibhili LeTrenitalia Sitimela
4. Amanani amathikithi eTrenitalia abiza malini 5. Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha iTrenitalia, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kwe-Standard Umnotho, I-Premium, Ibhizinisi kanye Nomphathi kwiTrenitalia 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe iTrenitalia
8. Isikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kweTrenitalia ukufika 9. Yini amashejuli wesitimela saseTrenitalia
10. Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yiTrenitalia 11. I-Trenitalia FAQ
I-Trenitalia ngezigqoko eziphakeme zesitimela
Inkampani iTrenitalia yethulwa ngomhlaka 1 kuJuni 2000.
Ngo 2005, le Umcibisholo Obomvu 1000, Kwethulwe umugqa wesitimela osheshayo weTrenitalia. Ijubane lelo le Frecciarossa 1000 Ifika kuma-300km ngehora.
Umzila omkhulu wesitimela wamazwe omhlaba uphakathi kweGeneva neMilan futhi kuthatha 4 amahora amaningi esikebheni iTrenitalia.
I-Trenitalia isebenza ngezinsizakalo zokuhamba ibanga elide nokuxhuma nezitimela zesifunda ukuya noma kuphi e-Italy.
Isitimela esinejubane elikhulu iTrenitalia yisevisi exhuma enyakatho iye eningizimu nasempumalanga nentshonalanga e-Italy nase-Italy neSwitzerland, France, E-Austria, futhi eJalimane.
I izitimela ze-trenitalia ahamba amabanga afinyelela ku-3oo km ngehora emigqeni yesitimela esinejubane elikhulu.
Ngo nje 3 amahora ongahamba ngawo usuka eMilan uye eRoma usuka eMilan uye eBologna kuwo 1 ihora.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi eTrenitalia
Amaphuzu aphezulu Ukuthola Ithikithi Elishibhili LeTrenitalia Sitimela
inombolo 1: Bhuka amathikithi akho e-Trenitalia kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Amathikithi eTrenitalia ayatholakala phakathi 2 ukuze 4 izinyanga ngaphambi kosuku lokuhamba. Ukubhuka ithikithi laseTrenitalia kusengaphambili kuqinisekisa ukuthi uthola amathikithi ashibhile kakhulu alinganiselwe. Amathikithi wesitimela akhuphuka ngentengo njengoba usondela ngosuku lokuhamba, ukuze wonge imali ekuthengeni kwakho ithikithi lesitimela, uku-oda ngangokunokwenzeka kusengaphambili.
inombolo 2: Ukuhamba ngeTrenitalia ezikhathini ezingekho ngaphezulu kwephakeme
Amathikithi eTrenitalia ashibhile ngesikhathi samahora okude, ekuqaleni kwesonto, futhi phakathi nosuku phakathi naphakathi kwesonto uhambo lwesitimela (NgoLwesibili, NgoLwesithathu, nangoLwesine) zivame ukunikela ngamanani ashibhile. Ngamanani amahle kakhulu, ungathathi izitimela zaseTrenitalia ekuseni nakusihlwa phakathi nesonto (ngenxa yabahambi abaningi bebhizinisi). Gwema uma kungenzeka ukuthatha izitimela zaseTrenitalia ngoLwesihlanu nangoSonto kusihlwa (evumelana nokuthola izimpelasonto) nangesikhathi amaholide omphakathi futhi nangesikhathi samaholide esikole ngoba ngalezi zikhathi izintengo zamathikithi eTrenitalia Skyrocket.
inombolo 3: Oda amathikithi akho eTrenitalia lapho uqiniseka ngesheduli lakho lokuhamba
Inkonzo yezitimela zaseTrenitalia iyadingeka kakhulu. Ithikithi lesitimela laseTrenitalia Base lingashintshaniswa futhi liguqulwe ngaphandle komkhawulo futhi ithikithi loMnotho Ojwayelekile lingashintshwa kanye ngaphambi kosuku lokuhamba kwesitimela. Awukwazi ukushintshanisa noma ubuyisele amanye amathikithi eTrenitalia, kepha kunezithangami ku-inthanethi ongathengisa ngazo ithikithi lakho laseTrenitalia. Gcina isincomo sesitimela se Ukuhamba kweTrenitalia iwukubhuka uma uqiniseka ngohlelo lwakho lokuhamba.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho eTrenitalia ku-Gcina A Sitimela
Gcina isitimela kuneminikelo enkulu kakhulu yamathikithi wesitimela eYurophu nasemhlabeni jikelele, sithola amathikithi e-Trenitalia ashibhile. Sixhunywe ku-opharetha bezitimela abaningi futhi ubuchwepheshe bethu bama-algorithms akunika ithikithi leshibhile laseTrenitalia e-Italy ngokuhlanganiswa kwabanye abaqhubi bezitimela kwezinye izindawo. Futhi singathola ezinye izindlela zezitimela zaseTrenitalia.
Amathikithi weBari kuya eFasano
Taranto kuya amathikithi Fasano
Milan kuya amathikithi eFlorence
IVenice kumathikithi eMilan
Amanani amathikithi eTrenitalia abiza malini?
Izintengo zamathikithi eTrenitalia ngokwesibonelo zingaqala ngo- € 21 ngesikhathi sokunyusa kodwa zingafinyelela ku- € 97 ngomzuzu wokugcina. Amanani amathikithi eTrenitalia kuya ngesigaba osikhethile futhi nansi itafula lokufingqa lamanani aphakathi neklasi ngalinye leRoma-Naples / eRoma – Milan / Milan – UFlorence uhambo:
Okujwayelekile 21 € – 70 € 40 € – 130 €
I-Premium 42 € – 90 € 78 € – 172 €
Ibhizinisi 47 € – 97 € 90 € – 190 €
Milan to Naples amathikithi
UFlorence kuya amathikithi eNaples
Amathikithi eVenice kuya eNaples
Amathikithi wePisa kuya eNaples
Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha iTrenitalia, futhi ungahambi ngendiza?
1) Ubuhle bezitimela zeTrenitalia buqala ngeqiniso lokuthi ungasuka futhi ufike ngqo enkabeni yedolobha kunoma yimaphi amadolobha ovela kuwo. ngokuqinisekile, le yinto ehlukile kakhulu kuzitimela, ikakhulukazi uma uqeqesha ukuhamba usuka eRoma, Milan, Florence, Geneva, noma iMonaco, kuyinzuzo enkulu iTrenitalia. Ngenxa yokuthi uhambo luqonde enkabeni yedolobha, ugwema ukugcwala kwethrafikhi futhi akukho lutho olubi kunokunamathela kwitrafikhi eholidini.
Uma kukhulunywa ngamathikithi wesitimela eTrenitalia intengo, amanani ajwayele ukwehluka kaningi. Okunye ukukhushulwa kukuvumela ukuthi uthole amathikithi ashibhile wesitimela, kepha ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokusuka, amanani aya ngokwanda ngakho-ke uma uthanda ukuhamba ngokushelelayo, I-Trenitalia ingeyakho!
2) Ukuhamba ngendiza kunenqubo yokuphepha esikhumulweni sezindiza. Lokhu kusho ukuthi kufanele okungenani ube 2 amahora ngaphambi kokusuka kwakho okuhleliwe. NeTrenitalia, udinga ukufika nje 30 imizuzu kusengaphambili. Futhi, kufanele uye esikhumulweni sezindiza usuka enkabeni yedolobha. Ngakho, uma ubala sonke isikhathi sokuhamba, I-Trenitalia ihlala iwina ngesikhathi sokuhamba esiphelele futhi ngentengo uma ubala isikhathi sakho njengemali.
3) Kwesinye isikhathi izintengo zamathikithi eTrenitalia ziphezulu kunendiza enani lobuso bethikithi, kepha ukuqhathanisa kufanele kufake phakathi ukuthi kubiza malini ukuthatha izindlela zokuhambisa esikhumulweni sezindiza. Ngaphandle, kwezinye izimo, uthola nesikhathi sokuphumula lapho ukuhamba ngezitimela zaseTrenitalia futhi ekugcineni ngeTrenitalia, awunazindleko zamakhethini.
4) Okokugcina, Izindiza ngesinye sezizathu zokungcoliswa komoya, ezingeni lokuqhathanisa, Izitimela zeTrenitalia imvelo enobungane kakhudlwana, futhi uma uqhathanisa indiza nohambo lwesitimela, ukuhamba kwesitimela kungukungcola komoya ongcolisayo okungu-20x ukwedlula izindiza.
Amathikithi eMilan ukuya eGenoa
Amathikithi eRoma ukuya eGenoa
UFlorence kuya amathikithi eGenoa
Amathikithi eVenice ukuya eGenoa
Yini umehluko phakathi komnotho ojwayelekile, I-Premium, Ibhizinisi, kanye Nesiphathimandla kwiTrenitalia?
I-Trenitalia inikeza izinsizakalo eziningana zamakilasi wesitimela ezakhelwe noma yisiphi isabelomali nohlobo lwesihambi, ngabe ungumhambi webhizinisi, ukuzilibazisa, noma zombili.
Umehluko omkhulu phakathi kwamakilasi wesitimela weTrenitalia wesitimela ukungashintshi kokushintshwa kwamathikithi, amanani, nezinsizakalo. Ngaphezu kwalokho, ithikithi lesitimela elijwayelekile loMnotho yindlela eshibhile futhi eguquguqukayo yokuhamba e-Italy.
Amathikithi Ajwayelekile Womnotho weTrenitalia:
I-Trenitalia Ithikithi lesitimela elijwayelekile ishibhile kunazo zonke imali yeTrenitalia. Kungcono ukubhuka leli thikithi lesitimela kusengaphambili ngoba amathikithi aphansi amanani aphansi – bathengisa ngokushesha. Abahambi abaphethe ithikithi lesitimela elijwayelekile bangathatha amasudi afanele endaweni yemithwalo, mahhala futhi bangakhansela ithikithi labo lesitimela ngaphambi kokuhamba futhi bathole imbuyiselo engaphelele (inkokhelo yokubanjiswa ye- 20%).
Amathikithi Omnotho Wokugcina weTrenitalia:
Lesi sigaba samathikithi esitimela sibiza kakhulu kunhlobo lwethikithi laseTren Titalitalia, le Ithikithi Lezomnotho iTrenitalia Premium inikeza izinsizakalo ezingeziwe. Lolu hlobo lwamathikithi wesitimela luyatholakala ku-Trenitalia high-speed train futhi ivumela ushintsho lwesikhathi nosuku kanye kuphela ngaphambi kosuku lokuhamba.
Ngaphezu kwezinzuzo zamathikithi wesitimela ajwayelekile, Amathikithi eTrenitalia Economy Premium anikela ngezihlalo ezimnandi ezinamagumbi amaningi omlenze nezihlalo zokulala ohambweni olude. Ngaphezu kwakho konke, kukhona amamenyu amathathu wokudla ongakhetha kuwo futhi isidlo esincane neziphuzo zizohanjiswa esihlalweni sakho phezu kwezitimela zaseTrenitalia.
Amathikithi Ebhizinisi E-Treintalia:
I Ithikithi lebhizinisi laseTrenitalia abathengi bangajabulela zonke izinzuzo esizibhale ngenhla nokho, abagibeli beTrenitalia Business Premier bayazuza ezikhwameni eziningi zemithwalo, izihlalo zesikhumba zikhululekile ze-ergonomic, i-legroom enwetshiwe, amamenyu amathathu okudla ongakhetha kuwo. Ngaphezu kwalokho, unezindonga zobumfihlo nendawo ethule ezindaweni zeBhizinisi eziqokiwe ezitimeleni zeTrenitalia.
Amathikithi aphezulu we-Treintalia:
I Ithikithi Lokulawula iTrenitalia abathengi bangajabulela zonke izinzuzo ezichazwe ngenhla ngaphezu kwezihlalo zesikhumba ezibanzi ezihlala phansi zesikhumba ukubeka amakhanda abo futhi bajabulele ukubukwa okuhle kwe-Italy.
Ingabe kukhona okubhaliselwe kweTrenitaliainkomba?
Kukhona iPhasi ye-Italy, kepha kunconyelwa kuphela njengenketho eshibhile uma uhlela ukuqeqesha ukuhamba ngaphezulu 14 izinsuku, okubhaliselwe kuvumela ukuhlola i-Italy ngesitimela ngokudlula okukhethekile. Bangu 3 amazinga wokuphasa atholakalayo: Kulula, Induduzo, kanye no-Executive futhi ungakhetha inombolo yohambo olususela kulo 3 ukuze 10 bese ukhetha uhlobo lwesitimela kusuka kuFrecce enejubane elikhulu kuya ekuhlanganyeleni nase-EuroCity.
Ukudlula kuyatholakala ngefomethi yamaphepha futhi kufanele kusebenze ngaphakathi 11 izinyanga kusukela ngosuku lokuthenga.
Isikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kweTrenitalia ukufika?
Ukuze uthole isitimela sakho seTrenitalia futhi ube ngesikhathi esifanele, ujantshi uncoma ukufika okungenani 30 imizuzu ngaphambi kokuhamba kwesitimela sakho. Ngempela siseSave A Train, kholwa ukuthi isikhathi esanele futhi ungathokozela nezitolo futhi uthole lezo zinto ozidingayo uhambo lwesitimela ukuze lubushelelezi ngangokunokwenzeka.
Yini amashejuli wesitimela saseTrenitalia?
Lo ngumbuzo onzima kepha lowo ongagcinwa ngu-A Isitimela ungawuphendula ngokugcwele nasesikhathini sangempela. Ngokuningiliziwe yiya ekhasini lethu lasekhaya, thayipha imvelaphi yakho nendawo oya kuyo e-Italy, futhi ungathola okunembe kakhulu Amashejuli wesitimela weTrenitalia bangu. Izitimela zeTrenitalia ziqala ekuqaleni 6 nginguye 11 pm kusihlwa ukusuka eMilan kuya eBologna, ukucacisa iningi lezitimela zeTrenitalia zigijima kuze kube kusihlwa kakhulu ngesitimela esisuka njalo uhhafu wehora noma ngaphezulu.
Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yiTrenitalia?
I-Trenitalia ihlanganisa lonke i-Italy, Nokho, iziteshi ezinkulu zikazwelonke iMilan, eRoma, I-Venice, Naples, eTurin, I-Bologna, Geneva, Florence, futhi Verona. Bangu 11 iziteshi zomhlaba jikelele: 5 Iziteshi zezitimela zaseTrenitalia eSwitzerland futhi 6 iziteshi eFrance kanti ezimbalwa e-Austria naseJalimane naseCroatia. Ngakho-ke kusobala ukuthi ubungahamba kahle futhi ngokushesha udabule ama-European amahle futhi ubabaze ukubukwa kwe-Italy ngaphandle kokulahlekelwa yilutho!
Isiteshi sesitimela esiphakathi nendawo eMilan sitholakala ematasa kakhulu Piazza Duca d'Aosta. Isiteshi sesitimela sihle ngokwakha futhi sizungezwe ama-skyscrapers. Ngakho-ke ngenkathi usalinde ukugibela isitimela iTrenitalia ungahamba uzungeze ubuhle bezithombe ezinhle kakhulu.
IRoma Termini ingesinye seziteshi ezinkulu zezitimela eYurophu. Itholakala ngqo ukusuka kubhavu kaDiocletian eRoma yasendulo. Umnyango wokuya kwisiginali usuka kuPiazza dei Cinquecento. Bangu 29 amapulatifomu ehhovisi lamathikithi wesitimela seTheritalia neTrenitalia esesikhungweni sesiteshi.
Isiteshi sesitimela iFlorence, Santa Maria Novella, kukude ukusuka eDuomo nokuhehelela kakhulu edolobheni elidala laseFlorence. Lesi siteshi siqanjwe ngegama lesonto laseSanta Maria Novella ngaphesheya kwesango laso. Ngakho, ungantshontsha izikhathi ezimbalwa ezinhle edolobheni elidala, ngaphambi kokuqhubeka nokwakho i-adventure elandelayo e-Italy.
I-Naples ukugcina empumalanga yedolobha elidala. Uma uhlela ukwenza ezinye uhambo losuku kusuka eNaples kuPompeii noma iSorrento, khona-ke nakanjani uzoma esiteshini sesitimela saseNaples ngohambo lwakho lwesitimela.
Uma ungaqiniseki ukuthi yisiphi isiteshi sesitimela okufanele usikhethe phakathi kwedolobha osivakashelayo, sazenzela esizeni sethu Zonke Iziteshi ukuya emadolobheni amakhulu, ngakho-ke i-algorithm yethu izokutholela isiteshi esifanele ukusuka lapho ufika khona.
Yini okufanele ngize nayo e-Trenitalia?
Okubaluleke ngokulinganayo ukuziletha ohambweni lweTrenitalia kubalulekile. Ngaphezulu kwayo qiniseka ukuthi unedokhumenti yakho yokuhamba yaseTrenitalia efonini yakho noma ephrintiwe futhi ipasipoti evumelekile kufanele ube nayo ngaso sonke isikhathi kuhle ukuba nomshuwalense wokuhamba.
Iyiphi inkampani engumnikazi weTrenitalia?
ITrenitalia iphethwe nguhulumeni wase-Italy futhi iyingxenye ye-FS Italiane Group.
I-Trenitalia I-FAQ yokuthi ngingaya kuphi neTrenitalia?
Okwezifunda, izitimela ezinkulu nezasemazweni aphesheya, Izitimela zeTrenitalia zingakuthatha noma yikuphi e-Italy nasemazweni akhethiwe anemingcele ne-Italy. Ngokwesibonelo, ngezitimela ezihamba ngesivinini esikhulu iTrenitalia ongahamba ngazo eFrance naseSwitzerland.
Ngabe yini inqubo yokugibela yeTrenitalia?
Amathikithi esitimela wokubhuka kanye nokugibela iTrenitalia akukaze kube lula. Ungathenga kalula ithikithi lakho le-Trenitalia ngomzuzu wokugcina ku-inthanethi futhi kuze kufike 1 ihora ngaphambi kokusuka kwesitimela. Okokugibela, okudingayo yiphasiphothi futhi ukwethula ikhodi ye-PNR (6-ikhodi yamadijithi). Ukucacisa, ikhodi ye-PNR ithunyelwa kuwe nge-imeyili yokuqinisekisa yokubhuka nge-e-ticket. Awudingi ukuphrinta ithikithi lesitimela ngaphambi kwesikhathi ngoba liyatholakala kuselula yakho futhi linamathiselwe ku-imeyili yokuqinisekisa, futhi isilawuli sesitimela singaqinisekisa ithikithi lakho ngegama ngegama lesimo esibi kakhulu.
Yiziphi izinsizakalo ku-Trenitalia?
Izitimela zeTrenitalia zine-cafe-bar ekhethiwe enikezwe iziphuzo nokudla okulula. Imenyu ifaka amasamentshisi, ama-chocolate we-chocolate, Ungadla, imishayo chocolate, ikhofi, itiye elinoshokholethi, netiye futhi ngemuva kwalokho ungadla futhi uphuze kule ndawo yokudlela yesitimela yokudlela noma uthathe lokho okuthengile ukubuyisela esihlalweni sakho. Uma uhamba ngebhizinisi, I-Premium, noma isigaba sokuqala ungakhetha isiphuzo samahhala sokwamukela kusuka kukho 9 iziphuzo ezitholakalayo noshukela, elungisiwe, noma isidlo esingenayo i-gluten. Kuzo zonke izitimela zeTrenitalia, kukhona izikhala zamandla eduze kwesihlalo sakho.
I-Trenitalia FAQ Ecelwa Kakhulu – Ngabe kufanele ngibhukhe isihlalo ngaphambi kweTrenitalia?
Lapho ubeka ithikithi laseTrenitalia, isihlalo sabelwa wena ngokuzenzakalelayo futhi ngeke ukwazi ukubeka isihlalo esikhethekile lapho wenza ukubhuka. Uma kunezitulo zamahhala uma ususitimeleni, uvunyelwe ukuhambahamba, shintsha izihlalo, futhi ube nendawo ehlukile.
Ingabe kukhona i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kweTrenitalia?
Lapho uthenga amathikithi akho eTrenitalia kusengaphambili, ungajabulela I-inthanethi ye-WiFi yamahhala kuzo zonke izitimela nohlobo lweTrenitalia frecciarossa.
Ekuphetheni, uma ufinyelele lapha, wazi konke okudingeka ukwazi mayelana nezitimela zaseTrenitalia futhi ulungele ukuthenga ithikithi lesitimela sakho seTrenitalia SaveATrain.com.
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.